e.tv and Multichoice win mobile TV spectrum licences in South Africa
Sep 10, 2010 – The Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) has decided to grant the radio frequency spectrum licences for the purpose of providing mobile TV in the country on Multiplex 1 to e.tv (40%) and Multichoice (60%).
News categories: ICASA, Digital TV, Mobile, Regulation, South Africa
May 2010 launch for TopTV DTH in South Africa
Mar 18, 2010 – On Digital Media (ODM) is on the verge of introducing choice, flexibility and affordability to the multi-channel television market in South Africa under its brand of TopTV.
News categories: On Digital Media, Digital TV, Satellite, South Africa
ICASA issues IPTV regulation discussion document
Feb 16, 2010 – The Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) has announced its intention to develop a regulatory framework for IPTV. ICASA has issued a discussion document on the subject with feedback invited by March 26, 2010.
News categories: Independent Communications Authority of South Africa, IPTV, Regulation, South Africa
South Africa's analogue switch-off moves out to 2013
Feb 15, 2010 – The Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) has issued new Digital Migration Regulations. The new regulations update the schedule for digital terrestrial TV (DTT) roll-out in the country.
News categories: ICASA, Digital TV, Regulation, South Africa, Terrestrial